प्रचण्ड-नेपाल समहूसँगै आन्दोलन गर्ने पौडेलको प्रस्ताव अस्विकार, ६७७४ वटै वडामा प्रदर्शन गर्ने देउवाको तयारी – NepalajaMedia
प्रचण्ड-नेपाल समहूसँगै आन्दोलन गर्ने पौडेलको प्रस्ताव अस्विकार, ६७७४ वटै वडामा प्रदर्शन गर्ने देउवाको तयारी
January 6, 2021 64
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशभरका स्थानीय निकायमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गराएका छन्।
पार्टीभित्र आन्दोलनको मोडालिटिका विषयमा फरक-फरक धारणाहरु आइरहेका बेला देउवाले देशैभरि आन्दोलनको माहोल बनाउन सबै स्थानीय निकायका सबै वडा तहसम्म विरोध प्रदर्शन गर्ने आफैँ प्रस्ताव गरेर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गराएका हुन्।
देउवाले शनिबार आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा पार्टीमा अनौपचारिक छलफल गराएर आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट वडा तहसम्म ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको हो।
बैठकमा देउवा आफैँले ३३० वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७५ पालिकाहरु र ६ हजार ७७४ वडामै प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए। देउवाले उक्त प्रस्ताव राखेपछि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।
सोहीअनुसार कांग्रेसले पुस २५ गते शनिबार देशभरिका ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुँदैछ। त्यस्तै माघ ३ गते शनिबार देशभरका ७ सय ७५ वटै पालिकाहरुमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन घोषणा गरेको छ भने माघ ८ गते विहिबार देशभका ६ हजार ९ सय ७४ वटै वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन राखेको छ। देउवाले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमबारे वडा तहसम्म जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
पार्टीभित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका केही नेताहरुले भने नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, पौडेलको प्रस्ताव बैठकबाट अस्विकृत भएको थियो। केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्यहरुले अन्य दलसँग मिलेर नभई कांग्रेस एक्लैले आन्दोलन गर्नुपर्ने विचार व्यक्ति गरेका थिए।
देउवाले बैठकमै ओलीको असंवैधानिक कदमबारे सबै जनतालाई जानकारी गराउनेगरी वडा तहसम्म प्रदर्शन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए।
Prevवन्यजन्तुको आक्रमणबाट १ वर्षमा ३३ जनाको मृत्यु, वनमा काम गर्नेको पनि छैन बीमा
Nextपुष २२ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
यसरी प्रेमीसँग रोमान्स गर्दै छिन धिरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी (तस्बिर सहित)
भाइरल बखत प्रतिभाको भयो बिछोड बखत रुदै,प्रतिभा के भन्छिन ? (हेर्नुहोस भिडियो)